अत्याधिक र’क्सी पिएका कारण कोमामा गएकि थिइन् यी युवती, अन्ततः कोरोनाले नै बचायो ज्यान! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > अत्याधिक र’क्सी पिएका कारण कोमामा गएकि थिइन् यी युवती, अन्ततः कोरोनाले नै बचायो ज्यान!
अत्याधिक र’क्सी पिएका कारण कोमामा गएकि थिइन् यी युवती, अन्ततः कोरोनाले नै बचायो ज्यान!
admin February 19, 2021 February 19, 2021 अन्तराष्ट्रिय, स्वास्थ्य	0
बेलायती नागरीक ओलिभिया २१ बर्षकी छिन् । उनको अधिक पिउने खराब बानी थियो । बढि तौल हुनु उनको अर्को समस्या थियो । तर उनको जीवनमा केही नाटकीय परिवर्तन भएको छ । उनले पछिल्लो १० महिनामा र क्सी खाइनन् र उनको तौल पनि उल्लेखनीय रूपले घटेको छ । ओलिभिया अब अरु मानिसहरूलाई उनीहरुको बानी सुधार्न प्रेरित गर्दैछन् ।
उनले भनिन् कि यदि तपाईं परिवर्तन चाहनुहुन्छ भने, यो तपाईंको लागि उत्तम अवसर हो र मलाई लाग्दैन कि तपाईंले फेरि यस्तो अवसर पाउनुहुनेछ । अरु मानिसहरूलाई उनीहरुको बानी सुधार्न प्रेरित गर्दा समेत बेवास्ता गरेपछि उनको यस्तो सम्मको अवस्था आइलागेकाे जानकारहरू बताउँछन् । **समाचारको भिडियो हेर्नुहोला***
दिनेशका बुवा भन्छन् – ‘भरोसाको त्यही एउटा छोरा थियो मेरो संसार डुब्यो’
काठमाडौ । भागरथी घटनामा भरपर्दो प्रमाण प्रहरीले दिन नसकेको भन्दै परिवारले शव बझ्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । तर विहिवार घटनामा संलग्न भएको भनिएका दिनेश भट्टले कर णी पनि गरेको स्वीकार गरेपछि भागरथीको शव परिवारले बुझेका छन् । दिनेशले ह’ त्या गरेको भएपनि कर णी भने आफुले नगरेको बताएँदै आएका थिए ।
मैले अब कसरी भन्ने, आफ्नो नजरमा त्यस्तो थिएन । मेरै नजरमा मात्रै होइन गाउँकै मान्छेहरू पनि तेरो छोरा यस्तो थिएन भन्छन् । अहिलेसम्म यस्तो भरोसा गरेको थियो । खै कुन दिनको दशाले यहाँ च पे टमा प स्यौं भनिरा’छन् गाउँलेले पनि । जसकी छोरी हुन्, ती भाउजूले पनि भनिराखेकी छिन्– यो मेरो छोरा हो । यो छोराले त यस्तो गरेको हुनसक्दैन भनिराखेकी छन् । अब मेरै छोरा मैले गरेको हो भन्छ त के भन्ने ? कर णी पनि गरेको हो भन्दैछ । नेपाल प्रेसले सार्वजनिक गरेको अडियो यस्तो छ ।
**समाचारको भिडियो हेर्नुहोला***
राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर यसरी गरियो भागरथीको अन्तिम संस्कार (भिडियो सहित)
कोरोना भाइरसबारे १२ वर्ष अघिको त्यो भविष्यवाणी मिल्यो, यसो भनेकि थिइन् यी महिलाले
बिदेशमा अझै यति धेरैकाे सँख्यामा छन् कोरोना संक्रमित!